सिमामा नेपाली: नियमविपरीत भारतीय भन्सार कार्यालय र दुई दर्जन बस्ती ! | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
सिमामा नेपाली: नियमविपरीत भारतीय भन्सार कार्यालय र दुई दर्जन बस्ती !
प्रकाशित मिति २३ माघ २०७४, मंगलवार १५:०० लेखक नेपालीजनता
सिरहा । लहानदेखि १८ किमि दक्षिणतर्फ व्यापारिक नाका ठाडीसँग जोडिएको दशगजाभित्रै भारतीय पक्षले नियमविपरीत वर्षौंदेखि भन्सार कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको छ । यहाँ दशगजाभित्रै बस्ती बसाइएको छ ।
जग्गा खाली रहेकाले घर बनाएर बसेको भारत, लौकाहाका सन्तोष साहले बताए । ‘बिहान–बेलुका मजदुरी गरी गुजारा चलाउँछौं,’ उनले भने, ‘दशगजामै कस्टम कार्यालय भएकाले हामीले पनि घर बनाएर बसेका हौं ।’ आफूहरू वर्षैंदेखि त्यहीँ बसिरहेको जनाउँदै उनले सबै गरी १२ वटाजति घर बनेको जानकारी दिए । यहाँ अधिकांश सुकुम्बासीकोबसोबास छ ।
‘जिल्लाबाट सीडीओ र एसपीसाबहरू यतातिर आउँदा हामी जहिल्यै पनि दशगजाबाट भारतीय कस्टम हटाउनुपर्छ भनेर कुरा राख्छौँ तर अहिलेसम्म पहल भएन,’ ठाडीका स्थानीय अगुवा कन्हैया भट्टले भने, ‘कस्टम कार्यालयअगाडि नै दशगजामा भारतीय नागरिकले चियापसल खोलेका छन्, बस्तीसमेत बसालेका छन् ।’
ठाडी सीमामा भारतीय लौकाहा बजार छ । त्यहाँ आइतबार र बिहीबार साप्ताहिक हाट बजार लाग्छ । त्यस क्रममा भारतीय पक्षले साइकल, मोटरसाइकल र चारपांग्रे सवारी नेपालतर्फ पार्किङ गर्दा यताका व्यापारीले सास्ती भोग्नुपरेको भट्टले सुनाए । सुरक्षास्रोतका अनुसार भारतको निकटवर्ती सहर जयनगरमा दुई देशका सुरक्षा अधिकारीको संयुक्त बैठकमा नेपालपक्षले सीमाछेउका मदिरा पसल हटाउने तथा भारतीय पक्षले ठाडीसँग जोडिएको दशगजाबाट भन्सार कार्यालय हटाउने सहमति भएको थियो । नेपाली सीमाछेउका मदिरा पसल हटाइए पनि भारतीय पक्षले भन्सार कार्यालय अझै हटाएको छैन ।
‘कस्टमसँगै भारतीय पक्षले सीमामै चेकजाँचका लागि ढाट नै राखेको छ,’ सशस्त्र प्रहरी बल ठाडीका प्रमुख सुशील बस्नेतले भने, ‘भारतीय सीमा सुरक्षा बलका अधिकारीसँग दशगजा क्षेत्रबाट कस्टम कार्यालय सार्न आग्रह गरेका छाैं, कार्यान्वयन भएको छैन, फेरि पनि पहल गर्छु ।’
भारतीय भन्सारका अधिकारीले भने स्थायी संरचना नभई व्यापारिक कारोबार र जाँचमा सहजताका लागि तत्काललाई छाप्रोबाट काम चलाउने गरिएको बताउँदै आएका छन् । नेपालपट्टिका भन्सार प्रमुख राजेन्द्र हमालले दुई देशको सीमा र कूटनीतिका कुरा भएकाले आफूले केही भन्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिए ।
ध्यान के हो ? नियमित ध्यान गरेमा के फाइदा ?
व्यस्त र प्रतिस्पर्धाको समयमा मानिसलाई धेरै विषयले तनावयुक्त बनाएको हुन्छ। लामो समयसम्म तनावमा बस्दा मानिसलाई कुनै कुरामा एकाग्रता नहुने,…
काठमाडाैं । एक व्यक्तिले भुवन केसीको नाममा अकाउन्ट खोलेर युवतीहरुलाई डेटिङको प्रस्ताव गरेका थिए ।
केही युवतीले नायक भुवन…
असार पहिलो साता प्रधानमन्त्री कप महिला क्रिकेट
काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री कप महिला टी–ट्वान्टी क्रिकेट प्रतियोगिता आगामी असारमा हुने भएको छ । महाकाली स्पोर्ट्स सोसाइटीको आयोजनामा कञ्चनपुरको…
योजना आयोगका कर्मचारी कार्यालयमै मृत भेटिए
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका एक कर्मचारी कार्यालयमा मृत भेटिएका छन् ।
सुब्बा बच्चु केसी कार्यालयमा लडिरहेको अवस्थामा भेटिएका हुन्…
शसस्त्र प्रहरीमा विवादै विवाद
काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरीमा सेवा अवधि र पदावधिलाई लिएर तीव्र विवाद उत्पन्न भएको छ। नयाँ बन्ने ऐनमा ३० वर्षे…